Edere site Tranquillus | Nov 25, 2018 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
N'isiokwu a, anyị na-akọwa otú ị ga-esi dee ozi email iji gosi na ị ga-egbu oge, ma ọ bụ oge na ụtụtụ maọbụ oge na-egbu oge maka ịrụ ọrụ gị.
Gini mere iji kwado igbu oge?
E nwere ọtụtụ oge ị ga-eji kwenye oge. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ị nọ ọdụ maka ọrụ n'ihi ihe a na-atụghị anya ya, ma ọ bụ n'ihi na ị nọ ọdụ maka ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mkpa ịkọwa oge ị na-egbu maka ihe ndị dị mkpa na ịrịọ mgbaghara maka onye nlekọta gị.
Obi sie gị ike na igbu oge apụghị ịbụ ihe mere a ga-eji chụpụ mmadụ ma ọ bụrụ na ọ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ! Agbanyeghị, ọ ka dị mkpa ịkọwa ya iji gosipụta ezi okwukwe gị.
Atụmatụ ụfọdụ iji kwado oge igbu email
Mgbe ị kwadoro oge igbu oge emailịkwesịrị ịkwado nkwụpụta gị ka o wee bụrụ eziokwu, n'ihi na ị gaghị enwe ike ime ka nkwenye dị iche iche kwenye.
Nke mbụ, ọ dị mkpa ịmalite site na ịrịọ mgbaghara maka oge ị na-egbu oge. Ọ bụrụ na igbu oge adịghị adabere na gị, onye nlekọta gị aghaghị ịghọta ya. Ọ bụrụ na igbu oge ahụ bụ nke gị, ịkwesịrị ka ịnwepụ onwe gị, mana biko kwenye onwe gị ma dee na ị ga-ahụ na ọ gaghị eme ọzọ.
Mgbe ahụ, dị ka o kwere mee, jiri ihe akaebe anụ ahụ kwado nkwenye gị. Ọ bụrụ na ị nọ ọdụ maka oge nlekọta ahụike (dịka ọmụmaatụ, nyocha ọbara), ị ga-enwe ike igosi akwụkwọ ahụike. N'otu aka ahụ ọ bụrụ na ịlaghachitere ọrụ n'oge n'ihi na ị nwetaghị azịza sitere n'aka onye na-ahụ maka gị na mbụ: tinye aka na nke gị. email a oyiri nke mbubreyo nzaghachi.
Nke a bụ ihe nṅomi ịgbaso iji kwado oge igbu oge site na email, ma ọ bụrụ na anyị ewere ihe atụ nke ọrụ nlekọta ahụike nke dịruru ogologo oge karịa ka a tụrụ anya ya.
Isiokwu: Igbu oge n'ihi nhọpụta ọgwụ
Ana m arịọ mgbaghara maka ụbịa n'ụtụtụ a.
Emere m oge maka nlekọta ahụike na-aga n'ihu na 8h, nke were ogologo oge karịa atụ anya ya. Ihe edemede nke nyocha a metụtara.
Echere m na ọ dịghị nsogbu ọ bụla na enweghị m ma ana m ekele gị maka nghọta gị
[Ntinye aka eletrọniki]
Lee usoro iri ndị ọzọ iji mee ka ọnọdụ gị kwekọọ
Email 1: Igbu oge n'ihi nwa na-arịa ọrịa
Ndewo [aha onye nlekọta],
Ana m arịọ mgbaghara maka igbu oge m… ..
O di nwute, igbu oge a bu n'ihi onodu puru iche kariri m ike, ebe obu na nwa m nwoke dara ezigbo oria. A manyere m ịkpọrọ ya ngwa ngwa gakwuru dọkịta. Agbalịrị m ime ike m niile ijide ma rute… awa na-adịghị anya.
N’ịmara ihe isi ike nke igbu oge a nwere ike ịkpata, ọ ga-amasị m inye gị ezigbo mgbaghara. Agaghị m ala azụ ịchụkwudo oge na-egbu oge ewere na faịlụ ndị dị ugbu a ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji zere nsogbu ọ bụla.
Biko nabata, Madam / Sir, okwu nke ekele m.
Email 2: Igbu oge ụgbọ oloko
Ewere m ohere idegara gị akwụkwọ ịrịọ mgbaghara maka igbu oge nke… awa …….
N’ezie, n’ụbọchị ahụ, m kụrụ ụgbọ oloko m mgbe m rutere n’ọdụ ụgbọ ahụ, na-enweghị ọkwa ọkwa tupu ụbọchị ahụ ma ọ bụ tupu m apụ n’ụlọ m. Ihe kpatara ụgbọ oloko ahụ ji ebu ibu na egwu ahụ, na-egbochi ụgbọ oloko ịgba ọsọ maka… awa.
Ana m arịọ mgbaghara nke ukwuu maka oge a karịrị ike m. Aga m eme ihe dị mkpa iji mejupụta awa ndị ahụ furu efu iji mezue faịlụ ndị dị ugbu a ma zere ịta ndị otu niile ahụhụ na ọrụ a.
Anọgidere m na njikwa gị dum, biko nabata ngosipụta nke echiche m kachasị elu.
Email 3: Na-egbu oge n'ihi mgbochi okporo ụzọ
Achọrọ m ịrịọ gị mgbaghara maka ịbịaghị n'oge nzukọ…. nke ga-ewere ọnọdụ na hours .. awa.
Thatbọchị ahụ, n'ezie rapaara m n'okporo ụzọ ruo… awa n'ihi oke ọghọm okporo ụzọ. Emechiri ọtụtụ okporo ụzọ iji mee ka ndị ọrụ mberede gafere, nke mere ka nnukwu nsogbu na njem.
O wutere m nke ukwuu maka igbu oge a na-atụghị anya ya, m ga-anọ ọdụ n'ọfịs obere oge ka m wee chefuo oge furu efu ma leba anya n'okwu ndị a tụlere n'oge nzukọ a.
Ana m ekele gị n'ọdịnihu maka nghọta gị, ma na-arịọ gị ka i kwere na ngosipụta nke ekele m kacha mma.
Email 4: Na-egbu oge n'ihi snow
Ana m alaghachikwute gị gbasara oge m na-egbu oge …… nke hours ..
Na… /… /…. , snow ama ofụk ofụri okoneyo. Mgbe m tetara n'ụra, ụzọ okporo ụzọ niile agabigala n'ihi oke snow na enweghị salting nke okporo ụzọ.
Agbalịrị m iji ụgbọ njem ọha na-abịa ọfịs ahụ, ma ọ dịghị ụgbọ okporo ígwè na-agba n'ihi na snow na-ekpuchi ụzọ niile. Aghaghị m ichere ruo… awa tupu m banye ụgbọ oloko.
Ana m arịọ mgbaghara n'ezie maka ihe a na-atụghị anya ya, m ga-eme ihe dị mkpa iji kwalite oge na-egbu oge n'ọrụ m n'ihi ihe a merenụ.
Na-eche na ihe a emeghị gị ntaramahụhụ nke ukwuu, biko nabata ngosipụta nke ekele m kacha mma.
Email 5: Igbu oge n’ihi ihe mberede igwe
Ọ ga-amasị m iji ozi a kọwaa igbu oge m nwere n'ụtụtụ a.
N’ezie, m na-agagharị n’ọrụ kwa ụbọchị. Taa, ka m na-aga n'ụzọ m na-agakarị, otu ụgbọala gbubiri m ma jiri aka ike tụda m. Enwere m nkwonkwo ụkwụ gbagọrọ agbagọ wee gaa ụlọ mberede maka ọgwụgwọ ụfọdụ. Nke a na-akọwa ihe kpatara m ji pụọ maka ụtụtụ, mana m bịara ọrụ n'ụlọ ọgwụ ozugbo.
Ọzọkwa, ana m arịọ mgbaghara maka ezi oge maka oge a karịrị ikike m na maka nsogbu ahụ kpatara. Aga m aga n'ihu na igbu oge iji zere ịkpọ ndị otu niile asị.
Email 6: Oge nkwụsị nke minit 45 n'ihi ahụ ọkụ
Ọ ga-amasị m ịrịọ gị mgbaghara maka abịaghị n'oge ..... nkeji iri anọ na ise.
M n'ezie nwere ahụ ọkụ n'abalị… .. M wee na-a medicineụ ọgwụ ma n'ụtụtụ mgbe m tetara, m nwere nnukwu isi ọwụwa ma ka na-eche a bit ọjọọ. Echere m nkeji ole na ole karịa ka ọ na-adị na mbụ ka ọrịa ahụ gafere tupu m bịa ịrụ ọrụ n'ọnọdụ dị mma.
Nke a na-akọwa oge m na-egbu oge nke 45 nkeji nke m ga-achọ ịrịọ mgbaghara n'ezie. Enwere m olile anya na emebeghị m ihe ọjọọ ọ bụla. Aga m ekwe ka m nọrọ obere oge na mgbede taa iji kwado oge a.
Daalụ maka nghọta gị, m dịkwa n'aka gị.
Email 7: Igbu oge n'ihi mmebi ụgbọ ala
N'ihi mmebi nke ụgbọ ala m, ejiri m nnwere onwe nke idegara gị aka na ntị na m ga-abịaghị n'oge…. nkeji / awa nke ụtụtụ a.
N'ezie, m ga-atụba ya n'ụlọ ndọji ngwa ngwa tupu m bia ịba ụgbọ njem ọha. Enwere m olile anya iru ulo oru na ... awa kacha elu.
Ana m arịọ mgbaghara n'ezie maka nsogbu ahụ, m ga-emekwa ihe dị mkpa iji gbochie oge a. Maka ozi gị, Achọrọ m iziga gị faịlị a ga - eweghachi taata elekere mbụ nke kachasị ọhụrụ.
Daalụ maka nghọta gị, m na-adịkwa site na ekwentị na email ruo mgbe m rutere n'ọfịs.
Email 8: Na-egbu oge n'ihi nzukọ ụlọ akwụkwọ
Ọ ga-amasị m site na obere ozi a ịrịọ mgbaghara maka igbu oge m delay. awa n'ụtụtụ a.
O di nwute, enwere m oge nleta ngwa ngwa n'ulo akwukwo nwa m n'isi ututu a. Nke were obere oge karịa ka atụrụ anya. Nzukọ nke ga-ewere ọnọdụ site na 7:30 am ruo 8:15 am, mechara mechaa…. oge. Emere m ike m niile ịbanye n'ọfịs ngwa ngwa o kwere omume.
Ana m arịọ mgbaghara maka ihe a merenụ. Aga m ewere usoro m iji kwụ ụgwọ maka igbu oge na faịlụ ụbọchị, na-enwe olileanya na agaghị m emekpa ndị otu ahụ ahụhụ.
Daalụ maka nghọta gị,
Email 9: Oge n'ihi iteta oku
Ọ ga-amasị m ịrịọ mgbaghara maka igbu oge nke… nkeji / awa.
N’ezie, n’ụtụtụ ahụ, anụghị m ụda olu mkpu m na-ada na-atụ uche m ụgbọ oloko m na-esikarị na-aga ọrụ. Traingbọ oloko na-esote bụ ọkara elekere mgbe nke ahụ gasịrị, nke na-akọwa ogologo oge. Ana m arịọ mgbaghara n'ezie maka ihe a mere nke mbụ ya kemgbe ọtụtụ afọ.
Achọrọ m ijide n'aka na ọnọdụ dị otú a anaghị eme ọzọ n'ọdịnihu, na ịchụkwudo site na ịnọ obere oge taa n'ọfịs.
N'olile anya na enweghi m nsogbu nke ukwuu banyere ihe a merenụ, biko nabata ngosipụta nke echiche m kachasị elu.
Email 10: Igbu oge n'ihi iku
M na-edegara ịrịọ mgbaghara maka igbu oge m. ihe… ..
N'ezie, a haziri abụbụ ọrụ mba ahụ n'ụbọchị ahụ nke ụgbọ njem ọha na ndị ọkwọ ụgbọ ala enweghị ike ịgbagharị na ọnọdụ ndị a na-emebu. Ọ bụ ya mere na agaghị m enwe ike ịbịa ọrụ n'oge n'ihi na enweghị m ike ịnya ụgbọ ala m ma ọ bụ ịnya ụgbọ njem ọha.
Ọzọkwa, m ga-echere ọnọdụ ahụ ịlaghachi na nkịtị ma ọ bụ obere karịa iji ụgbọ oloko na-esote….
Ana m arịọ mgbaghara maka ihe a merenụ karịrị ike nchịkwa m. Ezigala m gị onyinye m na ọrụ a…. nke ruru taa.
Hapụ ịdị njikere iji kwurịta ya,
Template Email iji kwenye oge July 26th, 2021Tranquillus
GỤỌ Kedu ka esi kwenye na ọnọdụ ọkachamara?
gara agaIhe nlele Email iji gosi na enwegh
-esonụỤdị Email maka ịkpọsa òkè gị na nzukọ